ज्याक मा ३० पटकसम्म असफल हुदाँपनि संसारकै धनी व्यक्ति कसरी बने ? - Jerung Films
ज्याक मा ३० पटकसम्म असफल हुदाँपनि संसारकै धनी व्यक्ति कसरी बने ?
wwwjerungfilmswwwjerungfilms 11 Aug 2019
काठमााडाैं -ज्याक मा का थुप्रै असफलताका घटनाहरू छन् । ती मध्ये कतिपय त निकै हास्यास्पद भएकाे स्वयमं उनी आफै बताउछन् ।
उनी प्राथमिक तहकाे परिक्षामा समेत दुइपटक असफल भए । निम्न माध्यमिक तहकाे परिक्षामा तीनपटक असफल भए । यूनीभर्सिटीमा तीनपटकसम्म असफल भए उनी । ३० पटकसम्म जागिरकाे लागि आवेदन दिए उनले, तर कसैले पत्याएनन् ।
उनी प्रहरीकाे जागिर खान समेत हिडे तर उनीहरूले उनलाई यसमा फिट नहुने कुरा बताए । जब उनी केएफसीकाे जागिर खान हिडे, जतिबेला केएफसी चीनमा भर्खरै भित्रिएकाे थियाे । त्यसमा करिब २४ जनाले आवेदन दिए तर उनीमात्रै त्यस्ता अगागी भए की उनीबाहेक अरू सबैले जागिर पाए ।
पूलिसकाे जागिर खान जाने ५ मध्ये उनीमात्र एक हुन् जसकाे भर्तीकाे प्रक्रिया अगाडी बढ्न सकेन । त्यसैले उनी भन्छन् , “तल पर्नु र अस्वीकृत हुनुले केहि फरक पार्दैन जिन्दगीमा ।”
उनले हार्वडमा अध्ययनकाे लागि आवेदन दिए तर १० पटकसम्म असफल भए । उनी भन्छन्, “मलाई थाहा थियाे कि म अस्वीकृत हुदै थिए भन्ने कुरा, मात्र मैले त्याे पनि देख्न चाहेकाे थिए।”
ज्याक मा सन् १९६४ काे डिसेम्वर १५ मा चीनकाे दक्षिणाी भागमा रहेकाे ह्वयाङजाेमा जन्मिएका थिए । उनी एकदमै पातलाे थिए र कक्षामा प्राय साथीहरूसँग उनकाे झगडा परिरहन्थ्याे । उनी कहिल्यैपनि विराेधी देखेर डराएनन् जाे उनीभन्दा शक्तिशाली थिए । त्यति नै वेला उनी लिउ सिइङ र मार्था एभरीले ले लेखेका प्रसिद्ध किताब ‘अलिबाबा’ सम्झन्छन् ।
उनले विद्यालय शिक्षा सकाइसकेपछि कलेजकाे प्रवेश परिक्षाका लागि आवेदन दिए तर त्यसमा पनि २ पटकसम्म असफल भए । त्यसपछि निकै मेहनतपछि उनले तेस्राे पटककाे काेसिसमा सफल भए र ह्वयाङजाे टिचर्स इन्सिच्यूटमा भर्ना भए । सन् १९८८ मा उनले कलेजकाे अध्ययन पूरा गरे र सम्भव भएजति सबै ठाउहरूमा जागिरका लागि धाए ।
केएफसी सहित गरी उनी दर्जनभन्दा बढीपटक असफल भए । त्यसपछि उनी अंग्रेजी शिक्षककाे रूपमा काम गर्न थाले । उनी आफ्नाे काममा निकै कटिबद्ध भएर लागे जबकी उनले त्याे स्थानिय यूनिफर्सिटिमा अध्यापन वापत मासिक मात्र १२ अमेरिकी डलर कमाउथे ।
उनलाई कम्यूटर र काेडिङकाे त्यति ज्ञान थिएन तैपनि एकदिन उनी जबर्जस्त इन्टरनेटकाे सहारा लिन बाध्य भए । उनले पहिलाेपटक कम्पूटरमा “वियर” काे बारेमा खाेजी गरे ।
तर चाइनिज वियरका बारेमा इन्टरनेटमा कुनै नामाेनिसान भेटिएन । त्याे समस्या नै उनका लागि समाधान बन्न पुग्याे र उनले चीनमा इन्टरनेट कम्पनी खाेल्ने निर्णय गरे । यद्धेपी उनका दुई प्रयास असफल भए । त्यसकाे ४ वर्षपछि उनले आफ्ना १७ जना साथीहरूलाई उनकाे अपार्टमेन्टमा बाेलाए र उनकाे लागि लगानी गर्न आग्रह गरे । र उनले अनलाइन बजारकाे दुनियामा “अलिबाबा” राख्ने निर्णय गरे ।
याे साइटले निर्यातकर्ताहरूलाई आफ्ना उत्पादनहरूकाे सूची पाेस्ट गर्ने सूविधा दियाे जसले गर्दा ग्राहकहरूले सिधै किन्न सक्ने सूविधा मिल्याे ।
याे सेवामा तुरून्तै विश्वभरबाट मानिसहरूकाे आकर्षण बढ्न थाल्याे । अलिबाबाले सन् १९९९ काे अक्टाेबरमा न्यूयाेर्कमा मूख्यालय रहेकाे अमेरिकी व्यङ्किङ तथा लगानी गर्ने कम्पनी गाेल्डम्यान स्याच बाट करिब ५ मिलियन यूएस डलर उठायाे ।
र २० मिलियन डलर सफ्टव्याङ्क भन्ने जापनिज टेलिकम कम्पनी बाट उठायाे जसले प्रविधी कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने गर्छ ।
आफ्ना स्टाफहरूकाे भेलामा उनले भने, “हामी सक्छाै किनकी हामी यूवा छाै । र हामी कहिल्यैपनि तयसबाट पछाडी हट्ने छैनाैं । ”
सन् २००५ मा याहुले करिब आफ्नाे ४० प्रतिशत स्टक रहने गरी कम्पनीमा १ बिलियन यूयस डलर लगानी गर्याे । त्यतिबेलाकाे समयमा यत्तिकाे लगानी आउनु अलिबाबाकाे लागि अत्यन्तै ठुलाे रकम थियाे जसले चिनमा इबेलाइ उछिन्न खाेज्दै थियाे र याे याहुका लागि पनि ठूलाे विजय थियाे ।
अलिबाबाले सेक्टेम्बर १९ मा आफुलाई जनतामाझ आए । मा ले सिएनबिसीमा भने, “आज हामीले के प्राप्त गरेकाे छाै त्याे भनेकाे पैसा हाेइन। आज हामीले प्राप्त गरेकाे भनेकाे मानिसहरूकाे विश्वास र माया हाे ।”
न्यूयाेर्क स्टक एक्सचेन्जकाे इतिहास मा कम्पनीकाे १५० विलियन यूयस डलरकाे आइिपिअाे प्रस्ताव गर्ने अलिबाबा अमेरिकामा सूचिकृत कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलाे थियाे ।
यसले यर्दा करिब २५ बिलियन यूयस डलर सहित उनी चाइनाकाे सबैेभन्दा धनी व्यक्ति बने । आइपीअाेले उनलाई पक्कैपनी एक धनी व्यक्ति बनाएकाे हुनसक्छ तर अहिलेसम्म उनले कुनै त्यस्ताे तडकभडक सामानहरू किनेकाे र विलासी जीवनशैली अपनाएका छैनन् । उनकाे अहिलेपनि केहि सरल आनीबानी छन् जुन गर्भ गर्न लायक छन् ।
“मलाई लाग्दैन की उनले त्यति धेरै आफुलाई परिवर्तन गरेका छन् उनी अझैपनि त्यहि पूरानै स्टाइलका छन्,” उनका साथी चेन जीअाे पिङ ले यूयस टुडेलाइ भने ।
मा भन्छन् “मलाई लाग्छ हामी कुनै पनि कुरामा तल्लिन भएर लाग्नुपर्छ । तर हामी त्यसाे गर्दैनाै । आजपनि हामीलाई थुप्रै व्यक्तिहरूले अस्विकार गर्न सक्छन्र र गर्छन् पनि । मलाइ लाग्छ, याे दुनियाँमा ३० पटकभन्दा बढी असफल भएका मान्छे सायदै काेही छन् ।
हामीले मात्र के कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ भने हामीले कहिल्यै हार खानुहुदैन । एकमात्र चिज के हाे भने हामी पनि फाेरेस्ट गम्प जस्तै हाै । हामीले हाम्राे लडाइलाई निरन्तर जारी राख्नुपर्दछ । र हामीले आफैलाई निरन्तर सुधार गर्दै लैजानुपर्दछ ।
हामी सफल भयाै कि भएनाै भन्ने कुरामा हामी कहिल्यै गुनासाे गर्दैनाै । मैले भेटे कि जब मानिसहरू उनीहरूकाे आफ्नाे काम सकाउछन् । यदि तिनीहरूले गल्ति गर्छन् र असफल हुन्छन् , यदि तिनीहरू सधै अरूकाे बारेमा गुनासाे गर्छन् । ती व्यक्ति कहिल्यै अगाडी बढ्न सक्दैनन् ।
यदि व्यक्तिले आफैलाई मात्र परिक्षण गर्छन् कि पक्कैपनि मेराे यहा केहि गडबड भएकाे हुनसक्छ, त्यहा मेराे केहि गडबड भएकाे हुनसक्छ । र त्याे मानिसमामा केहि आशा छ र उसले पक्कैपनि एकदिन सफलताकाे बाटाे तय गर्नेछ। त्यसैले कहिल्यैैपनि हरेस नखानु, जिवनमा एकदिन अवश्य सफल हुनुहुनेछ।”